Accueil > Gazetin'ny nosy > Covid-19 : Olana be ny fasana handevenana
Covid-19 : Olana be ny fasana handevenana
Raha tarehi-marika farany omaly alahady dia 255 no tranga vaovao mitondra ny otrikaretina covid- 19, olona 355 no salama, ary 7 no nindaosan’ny fahafatesana, 90 no misy fahasarotana ny fitsaboana azy ireo. Mahatratra 114 ny olona maty hatramin’izay faha 19 martsa nisian’ity aretina ity teto Madagasikara izay. Raha ny salan’isa indray dia 240 isan’andro no olona vaovao mitondra ny otrikaretina raha manao kajy tsotsotra isika, ny isan’ny olona salama dia hatrany amin’ny 300 any ho any. Tarehi-marika ofisialy navoakan’ny fanjakana ireo no nahazoana ireo. Mazava dia mazava nefa ny tarehimarika ireo fa hoan’ny olona izay namonjy ny fitsaboana tany amin’ny hopitaly. Maro ny olona nanatona dokotera tsy miakina izay tsy tafiditra ao anatin’ireo voalaza eo ambony ireo. Olana be ankehitriny ny mahakasika ny fandevenana eto Antananarivo renivohitra mikasika ny fandevenana ny olona maty. Tsy ny olona maty vokatrin’ny covid-19 ihany fa ireo maty vokatry ny aretina hafa koa. Ny tena sahirana mafy ankehitriny dia ireo izay tsy manana fasana eto Analamanga satria tsy mahazo mivoaka sy mivezivezy koa izay maty rehetra. Toa lasa olana lehibe amin’izay mana-maty ity raharaha ity ankehitriny indrindra fa ireo avy any ivelanan’Analamanga. Eny Anjanahary no misy ny fasana izay azo andevenana ireo olona maty amin’izao fotoana izao na inona na inona no antonym nahafaty azy rehefa tsy manana fasan-drazana eto Imerina. Tsy misy azo aleha koa raha tsy eny amin’ity toerana ity satria sarotra no ahitana tany azo anaovana izany eto Analamanga. Ity toerana ity izay fananan’ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Ny zava-misy dia niakatra tampoka teo ny saran’ny fandevenana eny Anjanahary ity. Tato anatin’ny fisian’ity valanaretina Covid-19 ity dia tafakatra hatrany amin’ny “1million 200 milles ariary” na 6 000 000 fmg ny fandevenana eny Anjanahary amin’izao fotoana izao. Tsy takatry ny kely vola fa indrindra ireo sahira sy mahantra hoy ny fitenenana. Ireo mpikarakara ny fandevenana eny amin’ity toerana ity no mametraka izany sandany izany amin’ireo mana-maty tonga handevina eny. Ny BMH na ny “bureau municipal d’hygiène” dia mbola andoavana vola hafa koa, izay mitentina 60 000 ariary na 300 000 fmg. Mbola misy koa ny hofan’ny tany isan-taona izay tsy maintsy aloa eo anatrehan’izany. Raha tsy manana vola hatrany amin’ny 2 tapitrisa ariary na 10 000 000 Fmg izany amin’izao fotoana izao dia tsy afaka mandevina eto Analamanga mihitsy ireo vahiny marobe avy any amin’ny faritra izay tonga mipetraka eto eo anatrehan’izao fihibohana aram-pahasalamana nohon’ny “coronavirus” izao.
Eo anatrehan’izany rehetra izany dia mbola tsy misy aloha ny vaha-olana amin’ity fitadiavana fasana hilevenana ity eto Analamanga. Sao dia ho isan’ny laharam-pahamehana amin’ny raharaha ny valanaretina covid-19 ity raharaha ity momba ny toerana hilevenan’ireo maty ireo?
Olana be nohon’ny fahahazoana ny aretina covid-19 ny fahitana fasana hilevenana eto Analamanga amin’izao fotoana izao.Anjaran’ny kaominina Antananarivo ve sa ny fanjakana mihitsy izany?